Akụkọ - Achọ maka ụgbọ ala eletrik siri ike, Chevrolet Bolt EV mmepụta ga-abawanye site na 20%
Ochicho nke ugbo ala di ike, mmeputa Chevrolet Bolt EV ga-abawanye site na 20%
Na July 9, GM ga-abawanye mmepụta ụgbọala eletriki 20% nke Chevrolet Bolt iji zute karịa ahịa ahịa a tụrụ anya ya. GM kwuru na na United States, Canada na South Korea, ahịa zuru ụwa ọnụ nke Bolt EV na ọkara mbụ nke 2018 mụbara site na 40% ma e jiri ya tụnyere otu oge n'afọ gara aga.
GM CEO Mary Barra kwuru na okwu na March na Bolt EV mmepụta nwere ike ịga n'ihu na-abawanye. A na-emepụta Chevrolet Bolt EV na ọdọ mmiri Orion na Michigan, ahịa ahịa ya adịkwa ụkọ. Mary Barra kwuru na ogbako na Houston, "Dabere na mkpa ụwa na-arịwanye elu maka Chevrolet Bolt EV, anyị kwupụtara na anyị ga-abawanye mmepụta nke Bolt EVs n'afọ a."
Chevrolet kpọchie EV
Na ọkara nke afọ, Bolt EV rere 7,858 nkeji na United States (GM naanị kwupụtara ahịa na nke mbụ na nke abụọ), na ụgbọ ala na-arị elu site na 3.5% site na ọkara mbụ nke 2017. Ekwesiri ighota na Bolt's onye isi asọmpi n'oge a bụ Nissan Leaf. Dabere na akụkọ Nissan, ọnụahịa ire ụgbọ ala LEAF na United States bụ 6,659.
Kurt McNeil, osote onye isi oche nke azụmaahịa GM, kwuru na nkwupụta, "Mmepụta ndị ọzọ ezuola iji nweta Bolt EV ahịa ahịa ụwa. Mụbawanye ngwongwo ya na ahịa US ga-eme ka ọhụụ anyị banyere ikuku anwuru n'ụwa.
Na mgbakwunye na ịre ahịa na mgbazinye maka ndị ahịa, Chevrolet Bolt EV agbanweela n'ime Cruise Automation autopilot. Ekwesiri ighota na GM nwetara Cruise Automation na 2016.